Kuqhelekile ukuba umntu omnye okanye omabini amaqela angavumelani ngesigqibo kwimeko yabo. Ngaba awuvumelani nesigqibo senkundla? Ke kukho inketho yokubhena kwesi sigwebo kwinkundla yesibheno. Nangona kunjalo, olu khetho alusebenzi kwimicimbi yoluntu enomdla wemali engaphantsi kwe-EUR 1,750. Ngaba uyavumelana nesigqibo senkundla? Emva koko ungabandakanyeka kwinkqubo yenkundla. Emva kwayo yonke loo nto, elinye iqabane lakho linokugqiba ngokubhena.
Isiteyitimenti sezikhalazo siyalandela ingxelo yokhuseleko. Ngokwalo, umtyholwa kwisibheno unokufaka nezizathu zokwenza izigqibo ezichasene nesimangalo kwaye aphendule kwingxelo yezikhalazo. Isiteyitimenti sezikhalazo kunye nengxelo yokhuselo zidla ngokuphelisa ukutshintshiselana ngezikhundla kwisibheno. Emva kokuba amaxwebhu abhaliweyo etshintshiwe, ngokomgaqo akusavunyelwa ukubeka phambili izizathu ezintsha, nokuba akunakwenziwa ibango. Kuyacaciswa ke ukuba ijaji ayinakuphinda inake izizathu zesibheno ezibekwe ngaphambili emva kwengxelo yesibheno okanye sokuzikhusela. Oku kuyasebenza ukwanda kwebango. Nangona kunjalo, ngendlela eyahlukileyo, umhlaba usenokwamkelwa kamva ukuba elinye iqela linike imvume yalo, isikhalazo sivela kuhlobo lwembambano okanye imeko entsha ivele emva kokuba kungeniswe amaxwebhu abhaliweyo.
Inyathelo lokugqibela kwinqubo yomthetho ekubhengeni umgwebo. Kwesi sigwebo, inkundla yezibheno iya kubonisa ukuba isigwebo senkundla besichanekile na. Ngokusebenza, kungathabatha ukuya kwiinyanga ezintandathu okanye ngaphezulu ukuze amaqela ajongane nesigwebo sokugqibela senkundla yesibheno. Ukuba izizathu zomfaki-sicelo ziyaqinisekiswa, inkundla iyakuthi ibeke ecaleni isigqibo esigqithisiweyo kwaye ilihlawule ityala ngokwayo. Ngaphandle koko inkundla yesibheno iya kuxhasa isigwebo esivumelanayo.
Ngokwesiqhelo, amaqela abambelela kwisigwebo senkundla yesibheno kwaye ityala labo lixazululwe kwisibheno. Nangona kunjalo, awuvumelani nesigwebo senkundla ngokubhena? Ke kukho ukhetho lokufaka isidumbu kwiNkundla ePhakamileyo yaseDatshi ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintathu emva kwesigwebo senkundla yesibheno. Olu khetho alusebenzi kwizigqibo ze-ABRvS, CRvB kunye ne-CBb. Emva kwayo yonke loo nto, iingxelo zalo mzimba zinemigwebo yokugqibela. Ke ngoko akunakwenzeka ukuba ucele umngeni kwezi zigwebo.